Oromiyaatti Manni Murtii Aadaa Dhiyeenyatti Hojii Jalqabuuf Jedha
Adoolessa 14, 2021
Manni Murtii Walii galaa Oromiyaa Wixinee labsii Mana Murtii Aadaa’f fudhatama kennu qopheessuu beeksise. Obbo Gonfaa Atoomaa Diirekterri Koomunikeeshinii Mana Murtii Walii gala Oromiyaa, wixineen labsii mana murtii aadaa naannoo Oromiyaatti ijaaruu kun kan barbaachiseef sirna jaarsummaafi araara buusuu naannoo Oromiyaa keessatti ture gara qaama seerummaatti seensisuufii jedhu yaada isaanii VOA’f yoo kennan.
Dabalanii yoo haala wixineen kun itti qophaaye yoo dubbatan wixinee kana jalqaba qopheessuuf barbaachisummaansaa akka gaggeeffame ifoomsan. Kanas Inistiitiwutiin leenjii ogeessota qaamolee haqaa fi qo’annoo seeraa Oromiyaa Adaamaa jirutu gaggeesse jedhu.
Kanaanis waggaa darbe kana qofaa mana murtee idileetti himatoonni kuma dhibba jahaa ol akka ilaalaman himanii kun ammoo abbootii seeraatti hojii akka baayyisee akkasumas warra himannaaf deddeebiwus baasii baayyeef saaxile jedhan.
Kanaaf duudaa sabni Oromo qabu kana hojiirra oolchuun barbaachise jedhu. Kanaanis wixineen kun qophaayuu ibsan. Kana keessattis Waajjirri Aadaa fi Tuurizimii, Manni Murtii Olaanaa Oromiyaa fi Waajjirri Pirezdentii Oromiyaa waliin tahuun adeemsa wixinee kanaa keessatti hirmaataniiru jedhu.
Obbo Gonfaan, wixineen kun erga qophaayee, fi adoo hin qophaayin durallee, dhimmuma kanarratti, abbootii Gadaa naannoo Oromiyaa jiranii fi qaamolee seeraa dhimmi ilaallatu guula mareen ballaan gaggeeffameerallee jedhu.
Wixineen kun mana murtii Aadaa sadarkaa lamatti akka qoodus himu. Inni duraa sadarkaa gandaatti yoo tahu, inni sadarkaa aanaatti hundaawu ammoo mana murtii aadaa oldabarfataa jedhamee waamama. Himatawwan oliyyannoo mana murtii aadaa gandaarraa dhufe kan ilaaludha jedhu.
Wixineen kun akkaataa hojii, ijaarsa jaarrolee gandaa kaasuun dhimmoota dhufan ilaalaniis of keessatti kan hammateedha.
Akka Obbo Gonfaan jedhanitti manni murtii aadaa kun itti gaafatamni isaa mana murtii aanaatiifi dha. Ijaarsa mana murtee kana keessatti manni murtii walii gala Oromiyaa qaamolee hedduu hirmaachisuu himaa. Isaan Keessaa takka abbootii Gadaati. Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa Hirreessoo warra wixinee kana qopheessuu keessatti hirmaate keessaa takka.
Abbaan Gadaa Goobana Hoolaa Hirreessoo, manni murtee kuni hundaawuun tokko murtee manni murtee idilee kennu kan ‘aadaa Oromoon ala’ jedhan hambisuuf gaariidha jedhu. Itti aansees, nama adabbiin yakka rraa hin deebisu kanaaf yoo jaarrolee mana murtii kana keessa jiran namoota wal dhaban araarsanii akka aadaatti gorsani, yakkillee ni hirrata yaada jedhu kaasani.
Obbo Gonfaa Atoomaa wixineen kun qophaayee, manni ogeeyyiin seeraa, beektonni sirna gadaa fi haawwan siiqqeee llee, caffee Oromiyaatti irratti mariin gaggeeffameera jedhan. Dabalaniis manneen murtii kun akkuma mana murtii idilee mirgi walabummaan waa murteessuu isaanii eegaamaafiifi jechuunis dabalataan dubbataniiru.
Wixineen Mana Murtii aadaa kunis dhuma torbee kanaa Caffee Oromiyaaf dhiyaatee ragga’a jedha ragaan Mana Mutii Olaanaa Oromiyaarraa argame.
Hiriirri Mormii Kuubaa Keessatti Geggeessame Deggersa Sadarkaa Addunyaa Argate
Afriikaa Kibbaa Keessatti Haleellaan Lubbuu Galaafate Itti Fufe
Yunaayitid Isteetis Biyyoota Ja’a Keessatti Fixiinsa Sanyiitu Raawwatame Jette
Gumiin Mirga Namaa Dhiittaa Mirga Namaa Tigraay Keessaa Irratti Murtii Dabarse
Dhalattoonni Tigiraay Hedduminaan Kan Hidhamaa Jiran Tahuun Gabaasame
‘Safuun Du’eera,” Jedhu Barreessaan Kitaaba Beekumtaa Oromoo